Fifandraisan'ny mpampiasa sy ny mpiasa | Ordre National des Psychologues de Madagascar
Ny tanjona amin’ity asa fikarohana manaraka ity dia ny hampisongadina ny fifandraisana misy eo amin’ny fomba fijery ny rariny amin’ny endriny samihafa (ny vidin-kasasarana azo, ny lalàna sy fomba fanatanterahana ny fizarana ny vidin-kasasarana ary ny fomba fikolokoloana sy fifandraisana) sy ireo fihetsika ara-piaraha-monina eo anivon’ny orinasa (finiavana tia hanampy ny hafa, fifanampiana, fahaiza-mihaina, firaisan-kina).
Natao ihany koa io fikarohana io mba hizahana ny mety ho fiantraikan’ny fomba fifandraisan’ny mpampiasa sy ny mpiasa, araky ny toro-hevitra natsidik’ireo mpikaroka tany anaty lahatsoratra sy boky samihafa. Mba hafahana mamakafaka ny petra-kevitra mivohitra ao anatin’izany dia naka santionan’olona miisa telo ambin’ny fitopolo (73) izahay mba handray anjara amin’ny asa fikarohana.
Ireo mpandray anjara ireo dia mpiasa nosivanina tao anaty toeram-piasana miankina amin’ny fanjakana eto Madagasikara : rafitra lehibe izay mametraka ny ambaratongam-pifehezana ho laharam-pahamehana ka mampisongadina ny seho samihafa izay manome singam-panazavana ilaina amin’ny fanatanterahana ny fikarohana.
Ny tarehimarika azo tamin’ny fanadihadiana dia nafahana nanamaritra ireto ova samihafa manaraka ireto izay hita matetika eo amin’ny sehatrin’ny fitantanana : miainga amin’ny fitantanana sy fandrindrana ny fananan’asa ary ny fototr’asa na ny « GPEC », ny vidin-kasasarana, ny fomba fanatanterahana asa ary ireo fifandraisana maro samihafa mety manan-danja. Ireo endriky ny fitantanana ireo dia fihetsika « ivelan’ny andraikitra » izay voasokajy matetika ho tsy misy dikany firy kanefa manana ny lanjany izay tsy azo hamaivanina manoloana ny fahaizana manao ny mpiasa tsirairay avy, fa indrindra eo anivon’ny orinasa.
Ny valin’ny fanadihadiana azo dia manondro fa amin’ny ankapobeny, ny ova tsy miankina izay fomba fijery ny rariny dia hita fa mifandrohy manatsaka amin’ny ova miankina izay fihetsika ara-piaraha-monina eo anivon’ny orinasa. Na dia izany aza, raha raisina tsirairay ny petra-kevitra rehetra, dia misy ihany ireo fifandraisana tsy voatery hisy antony na koa tsy azo heverina manokana nohon’ny santiona izay nalaina. Tsy nitondra fiovana manan-danja firy izao ny fomba fifandraisan’ny mpampiasa sy ny mpiasa raha ny eo anivon’ireo ova voatanisa. Azo atao tsara ny fiadian-kevitra amin’izany.
Teny manan-danja : Fomba fijery ny rariny, fihetsika ara-piaraha-monina eo anivon’ny orinasa, fomba fifandraisan’ny mpampiasa sy ny mpiasa.